Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » Abahambi baseTshayina bakulungele kwaye banexhala lokubhabha kwakhona
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Abahambi baseTshayina bakulungele kwaye banexhala lokubhabha kwakhona.
Ngaphezulu kwesiqingatha sabaphenduli bophando bathi bakulungele ukuphuma kwilizwekazi lase China nje ukuba kuvulwe imida, kunye ne-mpuma ye-Asiya yeyona ndawo iphambili, ilandelwa yi-Yurophu, i-Australia / iNew Zealand kunye ne-Mpuma ye-Asia.
Ababini kwisithathu sabakhenkethi baseTshayina bathabathe uhambo ngenqwelomoya ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-COVID-19.
Iipesenti ezingama-81 zabaphenduli bathi bacwangcise ukubhabha kube kanye kwinyanga ezili-12 ezizayo.
Kwabo baceba ukuhamba, iipesenti ezingama-73 ziya kuhamba ngokuzonwabisa, ngama-24% kuphela acwangcisela iihambo zeshishini.
Ngokophononongo lwamva nje lweshishini lokuhamba, iipesenti ezingama-96 zabahambi kwi iTshayina bakulungele kwaye baceba ukuhamba ngomoya kungekudala.
I-81% yabaphenduli bophando bathi baceba ukubhabha kube kanye kwinyanga ezili-12 ezizayo kunye neepesenti ezingama-50 zokubhabha ngeli xesha lasekwindla.
Kwabo baceba ukuhamba, iipesenti ezingama-73 zatsho ukuba zezolonwabo kuphela ngama-24% kuphela acwangcisela ukhenketho loshishino.
Imfuno yokufakwa kweentente nayo iyaboniswa iTshayinaUkuhamba kwezithuthi zabantu, okubonisa iimpawu zokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ukusukela nge-Septemba ka-2021, ukugcwala kwe-China bekuku-87% yamanqanaba e-2019-indlela eya phambili kwi-Asia iphela (42%).
Olu phando luveze ukuba isibini kwisithathu (66%) sabahambi base China bathabathe uhambo ngenqwelomoya ukusukela oko kwaqala ubhubhane. Idatha yeeshedyuli ityhila uhambo lwasekhaya kwi-Q4 inyuselwe phambili kunamanqanaba angaphambi kobhubhane, ekhula nge-15% xa kuthelekiswa ne-Q4 2019.
Ukulandela iinyanga ezithintelweyo ezibangelwe ngumgaqo-nkqubo we-Zero-COVID wase-China, ukwanda kweemfuno zembuyiselo enkulu kuhambo lwamazwe aphesheya nolwengingqi kuyacaca.
Ngaphezulu kwesiqingatha (61%) sabaphenduli bophando bathi bakulungele ukuphuma kwilizwekazi iTshayina yakuba imida ivulekile, kunye noMzantsi-mpuma weAsia ingowona mmandla uphezulu okhethwayo, kulandele iYurophu, iOstreliya / iNew Zealand kunye neMpuma yeAsia.